Alahady 06 Janoary 2019. – FJKM
Alahady 06 Janoary 2019.
Fandalinana ny 2 Samoela
2 Samoela 1.1-16
Ratsy mandrakariva ny vokatry ny fandaingana noho izy avy amin’ny devoly . Eto dia fahafatesana no valimpitia nomena ilay zatovo. Fanontaniana no avy amin’i Davida mba hahalalany ny sehon-javatra marina. Tsy te-hihinana ambolony izy
Fanovana ny seho marina ny lainga . Misy zava-marina sy zava-noforonina ny tatitra eto. Tany an’ady tokoa izy ary maty tokoa i Saoly saingy namono tena . Nandainga izy mba hikendreny ny tombotsoa satria nihevitra fa ho faly i Davida noho ny fahafatesan’i Saoly. Tsy fantany tokoa fa i Davida aza tsy sahy namono azy satria voahosotr’i Jehovah izy.
Fanamarinan-tena tsy misaraka aminny lainga . Hoy izy : «dia nalaiko ny satroboninahiny teo an-dohany . Dia nanatona azy aho ka namono azy , satria fantatro fa tsy ho velona izy rehefa resy ka dia nalaiko ny satroboninahiny teo an-dohany ny fehi-tànana teo amin’ny sandriny ka nentiko aty amin’ny tompoko izany » (and10)
Fahendrena ny manadihady hialana amin’ny lainga
Fanontaniana no avy amin’i Davida mba hahalalany ny sehon-javatra marina. Tsy te-hihinana ambolony izy .
–Famonoana no valimpitia tandrify ny lainga . Nifanohitra tamin’ny nokendreny ny azony fa baiko hentitra narahina fanatanterahana teo no eo no nitranga : vonoy io fa namono ny voahosotr’i Jehovah. Tsarovy fa very ny mpandainga (Apo 21.8).
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra »Boky faha-3
Talata 25 Jiona 2019.
Alatsinainy 24 Jiona 2019.
Alahady 23 Jiona 2019
Sabotsy 22 Jiona 2019.
Zoma 21 Jiona 2019.
Alakamisy 20 Jiona 2019.
Alarobia 19 Jiona 2019.
Talata 18 Jiona 2019.
Alatsinainy 17 Jiona 2019.
Alahady 16 Jiona 2019.